Koenigsberg dia tanàn-dehibe tena mahaliana avy amin'ny fomba fijerin'ny mpizaha tany. Eto ianao dia mahita toerana maro, manomboka amin'ny Katedralina ary mamarana ny tsangambato ho an'i Vysotsky, mitsidika mozika maro sy teatra. Ary, mazava ho azy, raha te ho any Kaliningrad ianao, dia tsy tokony hadino ny trano fisakafoanana ao an-toerana. Ao amin'izy ireo dia afaka manandrana sakafo misy karazan-tsakafo manerantany ianao, mankafy atmosfera mahafinaritra ary mozika mahafinaritra. Noho izany, ny lahatsoratra dia momba ireo karazan'ny trano fisakafoanan'i Kaliningrad.
Ny trano fisakafoanana tsara indrindra any Kaliningrad
Ao amin'ireo trano fandraisam-bahiny Eoropeana dia misy ny "Britannica" . Alohan'ny anao ny fomba fanoratana Anglisy: tranom-bakoka amboaram-peo, 14 varieties vita amin'ny labiera ary 34 varieties of whisky ary, mazava ho azy, ny 5 nentim-paharazana. Ao amin'ny "Britannica" isan'andro dia misy sakafo vaovao, amin'ny fiaraha-misakafo amin'ny alina, dia manomana fandraisam-bahiny izy ireo. Ary matetika dia misy takelaka amin'ny sarimihetsika Anglisy sy fampielezana baolina kitra.
Misy trano fisakafoanana mahazatra miaraka amin'ny sakafo Lezônianina "HBH Juozo" dia tsy iray ihany, fa iray amin'ireo tsara indrindra any Kaliningrad. Eto ianao dia afaka manandrana sakafo tsy mahazatra toy ny lasopy miaraka amin'ny fihirana siramamy, boromailala mangatsiaka, karbona litonia , zeppelins , sns. Ary na dia ny dite tsotra aza eto dia manompo tsy fahita firy - ao anaty glas miaraka amin'ny labozia, noho ny fisotroana foana ny hafanana. Ao amin'ny baran'ny trano fisakafoanana dia hahita karazana cocktails maherin'ny 50 ianao, izay tianao hotadiavina!
Ho an'ireo fety sy antoko mpihetsiketsika dia misy ny orinasa tsara indrindra any Kaliningrad, mazava ho azy , ny Grand Hall . Ny lavarangana ambony, ny tsanganana sy ny balustrades dia hanao sakafo tsotra ao amin'io trano fisakafoanana io ho fankalazana marina. Misaotra ny sakafo mahavelona sy ny kalitao tsara, ny serivisy sy ny toerana azo antoka, ny Grand Hall dia heverina ho toerana tsara ho an'ny fampakaram-bady, fandraisana sy seminera samihafa.
Toeram-pisakafoanana any Beriziky
"Hercules" - vao haingana nisokatra, fa efa naharesy trano fisakafoanana beer. Ny trano fandraisam-peo anatiny dia mampahatsiahy ny vahiny amin'ny fotoana izay nantsoin'i Kaliningrad an'i Koenigsberg. Ny "fanasongadinana" ao amin'ny trano fisakafoanana dia ny biriky manokana, izay, araka ny voalazan'ny fomba ofisialy Okrainiana, ireo karazan-tsiramamy maitso sy maivana ary na dia mena aza mandeha. Ary toy ny sakafonao dia omena sakafo isan-karazany amin'ny sakafo Eoropeana ianao.
Ny iray hafa lavitra ny fenitry ny trano fisotroana labiera ao Kaliningrad dia Kropotkin . Izy io dia ao amin'ny foiben'ny fivarotana "Europe" ary manana efitrano fatoriana dimy. Ny mahaliana, ny tsirairay amin'izy ireo dia maneho ny androm-piainan'ny androm-piainan'i Peter Alekseevich Kropotkin, ilay mpanoratra malaza sy revolisionera, izay ny anarany no ity orinasa ity. Ao amin'ny mpamokatra labiera "Kropotkin" dia afaka manandrana karazana labiera efatra ianao, voatsangana eto.
Ao amin'ny trano fisakafoanana any Kaliningrad, ny "Sun Stone" dia iray amin'ireo toerana voalohany. Ary tsy ho tsinontsinona - eto dia ho faly amin'ny fanompoana mahafinaritra sy sakafo matsiro ianao. Ny aterineto ao amin'ny orinasa dia natokana ho Prussia medievaly, ary mahavariana ny mpanjifa ny fomba fijery malaza momba ny farihy amin'ny lohataona fahavaratra. Ny sakafo ao amin'ny trano fisakafoanana dia sakafo matsiro indrindra, fa azonao atao ihany koa ny mandidy sakafo vy. Ny lasantsy manokana ao amin'ny "Sun Stone" dia lasopy voatokana miaraka amin'ny kulebyaka ary alefa nentim-paharazana nentim-paharazana.
Ny Seafood dia miompana amin'ny "Club Club Fish" , izay antsoina koa hoe "Fish Club". Ny mpiasa an-tranomaizina, ny vidiny mety sy ny fanandramana tsy manam-paharoa amin'ny sakafo dia tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha. Aza adino ny manandrana ny lasopy mafanafana, Ny mpitsidika an'io trano fisakafoanana io dia asaina hitsidika azy ao anatin'ny haizina, rehefa misokatra ny fomba fijery mahafinaritra avy eny am-baravarankely mankany amin'ny nosy Kant sy ny amboara.
Mijanona ao Vladivostok any an-dranomasina
Visa ho any Dubai ho an'ny Rosiana
Rains any Thailand
Taom-baovao tany Parisy
Inona no hitranga any Roma?
Mila visa ho an'i Espaina ve aho?
Musées de Nizhny Novgorod
Famonoana amin'ny ankapobeny noho ny fitomboan'ny heriny amin'ny lehilahy
Ahoana no hanasarahana volo amin'ny afo?
Ahoana ny fisafidianana fitaovana fanofanana ho an'ny trano iray - inona no karazana tsara indrindra ho an'ny tokantranonao?
12 modely rosianina mahafinaritra 45 taona
Ahoana no nankalazan'izy ireo ny Krismasy tany Rosia?
Tabilao 10 - Ny fahasalamana
Sary roa an'i Mila Jovovich ho an'ny Vogue sy ELLE
Andriamanitraetsiya - fitsangatsanganana sy fikarakarana
Ny lohataonan'ny vehivavy
Fety iray amin'ny endriky ny Hawaii
Manicure amin'ny fomba fanisana nautique
Kamboty miaraka amin'ny courgettes
Rita Ora dia nanolotra fanangonana kilalao vaovao ho an'ny marika Tezenis
Fihetseham-bary tamin'ny fety nentim-paharazana taloha teo amin'ny Stella McCartney
Inona no cocktail ilaina oksizena - ny hevitr'ireo manam-pahaizana
Ahoana no mampitombo ny zamiokulkas?
Famerana ny riaka eo amin'ny rindrin'ny tranon'ny tranonjaza